နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ ချစ်သူအတွက် ရည်စူးပြီး ဆွမ်းကပ်လှူခဲ့တဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်…… – Cele Oscar
နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ ချစ်သူအတွက် ရည်စူးပြီး ဆွမ်းကပ်လှူခဲ့တဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်……
March 11, 2022 By L YC Celebrity
ပရိသတျကွီးရသေရုပျဆောငျ ညီထှဋျခေါငျ ကတော့ ရုပျရှငျ နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတျကားတှေ မှာ ကရြောကျ ဇာတျရုပျကို အကောငျးဆုံး နဲ့ အပီပွငျဆုံးသရုပျဆောငျနိုငျသူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ ညီထှဋျခေါငျ ဟာ လကျရှိ မှာတော့ အနုပညာအလုပျ တှကေို ရပျနားထားပွီး ကှယျလှနျသှားတဲ့ ခဈြသူအတှကျ သတိရတမျးတရငျး ကိုယျ့စိတျကိုကိုယျ နှဈသိမျ့ နရေတာပဲဖွဈပါတယျ။ သိပျခဈြရတဲ့ ခဈြသူ နဲ့ ရှလေကျတှဲပွီး အတူမနေ ရခငျမှာပဲ ခဈြသူက လူ့လောက ကွီးထဲက နှုတျဆကျထှကျခှာသှားတာမို့ ပိုလို့ကွကှေဲနေ ခဲ့ ရတာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာလညျး ညီထှဋျခေါငျက သူ့ရဲ့ဘဝထဲကနေ နှုတျဆကျ ထှကျခှာသှားတာ (၈) လတိတိပွညျ့ခဲ့ပွီဖွဈတဲ့ ခဈြသူအတှကျ ရညျစူးပွီး သံဃာတျောတှကေို ဆှမျးကပျကုသိုလျ ယူခဲ့တဲ့အကွောငျးကို “ဒီနေ့ ၈ လပွညျ့ပွီ။ တကယျ မရှိတော့ဘူး ဆိုတာ လကျခံနိုငျဖို့ ကွိုးစားရငျး…. ရညျစူး ကုသိုလျပွုပါတယျ မေ… လှမျးတယျ …” ဆိုပွီး ပွောလာခဲ့ပါတယျ။
ညီထှဋျခေါငျကတော့ သကှေဲကှဲခဲ့ရပွီဖွဈတဲ့ ခဈြသူကို သတိရတမျး တရငျးနဲ့ပဲ (၈) လတိတိ ပွညျ့ခဲ့ပွီဆိုပွီး ပွောလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ညီထှဋျခေါငျတို့ ခဈြသူနှဈဦး ဒီဘဝမှာ စောစောစီးစီးနှုတျဆကျခဲ့ရပမေယျ့ နောငျဘဝ ဆကျတိုငျးမှာ ပေါငျးဖကျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျနျော။
Source: Nyi Htut Khaung
crd Myanmar celebrities
ပရိသတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင် ညီထွဋ်ခေါင် ကတော့ ရုပ်ရှင် နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေ မှာ ကျရောက် ဇာတ်ရုပ်ကို အကောင်းဆုံး နဲ့ အပီပြင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ညီထွဋ်ခေါင် ဟာ လက်ရှိ မှာတော့ အနုပညာအလုပ် တွေကို ရပ်နားထားပြီး ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ချစ်သူအတွက် သတိရတမ်းတရင်း ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ် နှစ်သိမ့် နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူ နဲ့ ရွှေလက်တွဲပြီး အတူမနေ ရခင်မှာပဲ ချစ်သူက လူ့လောက ကြီးထဲက နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတာမို့ ပိုလို့ကြေကွဲနေ ခဲ့ ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာလည်း ညီထွဋ်ခေါင်က သူ့ရဲ့ဘဝထဲကနေ နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာသွားတာ (၈) လတိတိပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်သူအတွက် ရည်စူးပြီး သံဃာတော်တွေကို ဆွမ်းကပ်ကုသိုလ် ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းကို “ဒီနေ့ ၈ လပြည့်ပြီ။ တကယ် မရှိတော့ဘူး ဆိုတာ လက်ခံနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရင်း…. ရည်စူး ကုသိုလ်ပြုပါတယ် မေ… လွမ်းတယ် …” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့ပါတယ်။
ညီထွဋ်ခေါင်ကတော့ သေကွဲကွဲခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်သူကို သတိရတမ်း တရင်းနဲ့ပဲ (၈) လတိတိ ပြည့်ခဲ့ပြီဆိုပြီး ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ညီထွဋ်ခေါင်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦး ဒီဘဝမှာ စောစောစီးစီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရပေမယ့် နောင်ဘဝ ဆက်တိုင်းမှာ ပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
အရင်လိုဘဲ အနုပညာအလုပ်တွေ ပြန်လုပ်တော့မယ်လို့ ချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေကို အသိပေးလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်…….
အနုပညာလုပ်ငန်းတွေရပ်နားထားလို့ ဝင်ငွေမရှိတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် အေးမြတ်သူ…..